Mibilaogy ilay Iraniana mpikatroka ny zon’olombelona: Tafavoaka velona tamin’ny fonja, ny sesitany ary ny sivana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 30 Oktobra 2018 12:35 GMT
Marobe ireo bilaogy Iraniana miresaka ny olana mahakasika ny zon'olombelona ho toy ny antony fototra hisian'izy ireo. Misy “karazany” samihafa ireo bilaogy ireo: Penlog dia bilaogy iombonana izay te hiaro ireo bilaogera sy hiady amin'ny sivana. Ny “karazana” hafa dia bilaogy iray mifantoka amin'ny lohahevitra tokana toy ny releaseGanji (avotsory i Ganji). Mitantara fotsiny ny vaovao momba an'i Akbar Ganji, mpanao gazety voafonja, sy ny fitokonany tsy hihinan-kanina izany. Sarotra ny miresaka momba ny politika Iraniana, ny fiainana ara-tsosialy ary koa ny kolontsaina ary tsy lazaina intsony ny resaka zon'olombelona. Ny fiarovana ireo gadra politika, ny fitarainana manohitra ny sivana no tena hita amin'ny bilaogy Iraniana maro izay manana mpanoratra ao Iran na any ivelany.
Te hampahafantatra mpikatroka zon'olombelona iray aho izay mibilaogy amin'ny teny Farsi: Rtoa..Mehrangize Kar. Izy sy ny vadiny, Siamak Pourzand, dia mpikatroka zon'olombelona sy mpanao gazety navitrika nandritra ny taona maro ary samy nizaka mafy ny vokatr'izany.
Mehrangize Kar, dia monina any Etazonia na amin'ny teny hafa any an-tsesitany. Malaza ity mpisolovavan'ny zon'olombelona ity, talohan'ny revolisiona, noho ireo lahatsoratra sy ny fomba fanoratany. Nogadraina tany Iran izy rehefa nandray anjara tamin'ny fihaonambe niaraka tamin'i Ganji sy ireo Iraniana manam-pahaizana sasany hafa sy mpikatroky ny zon'olombelona tany Alemaina. Avotra tamin'ny homamiadana, ny fonja mitokana izy ary lasa an-tsesitany no niafarany. Tany Andrefana izy nandritra ny efa-taona ary tsy afaka miverina any Iran. Mampianatra any amin'ny oniversite amerikana samihafa momba ny demaokrasia any Iran izy, ankoatra ireo lohahevitra hafa. Nilaza izy fa tsy afaka mamoaka ny sangan'asany any Iran. Avy eo izy nitodika any amin'ny famahanam-bilaogy:
Te ho velona aho. Tsy nanaraka izany fomba izany aho (aterineto). Ny taratasy no nisy ahy … taranaka (mpandray) penina. Saingy tsy misy vahaolana hafa … 60 taona aho ary tsy manana fahalalana ara-teknika. Nanampy ahy ny tanora ary nanokatra ity varavarana ity ho ahy ….
Afaka mandray azy isika ary mirary soa azy.